ရော်နယ်ဒိုကို မှတ်ချက်ပေးရင်း ဆိုးလ်ရှားဟာ အိပ်ပျက်ညတွေ ပိုင်ဆိုင်ရတော့မယ်လို့ ပြောလိုက်တဲ့ ဂျေမီ ရက်ဒ်နပ် - Sports myanamr
Sky Sport ရဲ့ သတင်း သုံးသပ်သူ တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဂျေမီ ရက်ဒ်နပ် က မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းရဲ့ နည်းပြ ဖြစ်သူ အိုလီ ဂန်နား ဆိုးလ်ရှားဟာ ဆုဖလား ဆွတ်ခူးရေး ဖိအားတွေအောက် ကျရောက်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း ၊ မဟုတ််ရင် အလုပ်ပြုတ်သွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ် သွားခဲ့လိုက် ပါတယ် ။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းဟာ ဒီနွေမှာ အားနည််း နေခဲ့တဲ့ တောင်ပံ တိုက်စစ် နေရာကို အင်အား ဖြည့်တင်းဖို့ ဒေါ့မွန် အသင်းမှ လူငယ် ကြယ်ပွင်း ကစားသမား ဖြစ်သူ ဂျေဒန် ဆန်ချိုကို ပေါင် 73 သန်းနဲ့ ခေါ်ယူထားခဲ့သလို မလုံခြုံတဲ့ ဗဟို ခံစစ်နေရာကို ရီးယဲ မက်ဒရစ် တို့ရဲ့ ဝါရင့်နောက်ခံလူ ရာဖေးလ် ဗာရန်း နဲ့ အင်အား ဖြည့်တင်းခဲ့ ပါတယ် ။
ဒီအတွက် ယူနိုက်တက်တို့ဟာ ပေါင်115သန်း ဝန်းကျင် သုံးစွဲခဲ့ရ ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက် ယူနိုက်တက်တို့ဟာ မြို့ခံ ပြိုင်ဖက် မန်စီးတီး အသင်းဆီ ရောက်ရှိဖို့ သတင်းကြီး နေခဲ့တဲ့ တိုက်စစ်မှူးဟောင်း ခရစ္စတီယာနို ရော်နယ်ဒို ကို ယူရို 15 သန်း ( + အပိုဆုကြေး 8 သန်း ) နဲ့ ထပ်ဆင့် ခေါ်ယူခဲ့ကြ ပါတယ် ။
အခုတော့ ယူနိုက်တက်တို့ဟာ တကယ့် အင်အားတောင့်တင်းလွန်းတဲ့ အသင်းတစ်သင်း ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ ။ ထို့အတူ အသင်းအပေါ် ပရိသတ်တွေရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေလည်း မြင့်သထက် မြင့်တက်လာခဲ့ရပါပြီ။ အခုတော့ ဆိုးလ်ရှားဟာလည်း ဖလား လက်မဲ့ ဘောလုံး ရာသီတွေကို ကုန်ဆုံးစေဖို့ အစွမ်းကုန် ကြိုးစားရပါတော့မယ် ။
” ရော်နယ်ဒိုဟာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းဆီ ပြန်လည် ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပါတယ် ။ ဒါဟာ အတိတ်ကို တသသ ဖြစ်စေတဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ တစ်ခုပါပဲ ။ အဲ့ဒီလို အပြောင်းအရွှေ့ရဲ့ အလှတရား တစ်ခုက သူ့ကို ဒီအသင်းမှာ ပြန်လည် မြင်တွေ့ရတာ အရမ်းကို ကောင်းမွန်နေလိမ့်မယ် ဆိုတာပါပဲ “
” ဒါပေမဲ့ အခြားတဖက်မှာတော့ သူဟာ အသက် 36 နှစ် ရှိနေပါပြီ ။ အသင်းမှာ သူဘယ်လို အံဝင်မလဲ ? ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ လက်ရှိအချိန် မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်ပိုင်းမှာ နေရာစုံ ကစားပေးနိုင်တဲ့ တိုက််စစ်ကစားသမားကောင်း5ဦးလောက် အထိ ရှိနေကြလို့ ပါပဲ “
” ရော်နယ်ဒိုရဲ့ လက်ရှိ အသက်အရွယ်ကို ကြည့်ရှုလိုက်မယ်ဆိုရင် သူဟာ အထောင်တိုက်စစ်မှူး နေရာမှာ ကစားပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ် ။ မားကပ်စ် ရပ်ရှ်ဖို့ ၊ အီဒင်ဆန် ကာဗာနီ… သူတို့တွေဟာ ဒီလို အသင်းမျိုးမှာ ပွဲထွက်ကစားခွင့် ရရှိဖို့အတွက် ဝင်ဆံ့ နိုင်ကြပါ့မလား ? “
” ဆိုးလ်ရှား အတွက်တော့ အားလုံးကို ပျော်ရွှင်အောင် ထားနိုင်ရေးကပဲ ကြီးမားတဲ့ အလုပ်ကြီးတစ်ခု ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ် ။ ဒါဟာ ကြီးမားတဲ့ ဖိအားတွေကို ပေးဆောင််သွားပါလိမ့်မယ် ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူဟာ အခုထိ ဆုဖလားတွေ မဆွတ်ခူး နိုင်ခဲ့သေးလို့ပါပဲ ။ သူ့အနေနဲ့ တစ်စုံတစ်ခုတော့ ရရှိနေသင့်ပါပြီ “
” အခုတော့ အိုလီဟာ စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေ ပိုင်ဆိုင်နေခဲ့ရသလောက် ရေရှည်မှာ ဒီကစားသမားတွေကို ဘယ်လို ပျော်အောင် ထားရမလဲ ဆိုတဲ့ အတွေးတွေနဲ့ အတူ အိပ်ပျက််ညတွေကို ပိုင်ဆိုင်သွားရပါလိမ့်မယ် ” လို့ ဂျေမီ ရက်ဒ်နပ် က ထုတ်ဖော် ပြောကြား သွားခဲ့လိုက် ပါတယ် ။
Previous Article Transfer Deadline Day အတွက် နောက်ဆုံးရ အပြောင်းအရွှေ့ နဲ့ သတင်းများ